Famokarana Herinaratra Toby « hydrolienne » 80 apetraka manerana ny nosy
Hampiroboroboana eto Madagasikara ny fampiasana ny teknolojia famokarana herinaratra "hydrolienne". Lakandrano kely no ampiasaina mba hahafahana mamatsy herinaratra tsy an-kiato ny tanàna.
Nandritra ny fitsidihany ny tobim-pamokarana herinaratra tao amin'ny tanànan'Amboarakely kaominina Ambatolaona, ny sabotsy 11 mey lasa teo, no nanambaran'Atoa Vonjy Andriamanga, minisitry ny angovo, ny rano ary ny akoranafo fa tobim-pamokarana 80 mampiasa ity teknolojia ity no kendren'ny minisitera apetraka manerana an'i Madagasikara. Tanjona ny hametrahana paikady sy ny vahaolana iarahana amin`ny lafiny angovo sy ny herinaratra. Marihina hatrany fa ny angovo no fanoitra voalohany ho an`ny fampandrosoana. Saika manerana ny nosy no iharan`ny fahatapahan-jiro ary mizaka ny fatiantoka aterak`izany ny mpanjifa. Mila vahaolana fohy ezaka sy lavitrezaka ny rehetra satria vina lavitrezaka ny fametrahana toby famokarana herinaratra, indrindra na dia angovo azo havaozina no ampiasaina amin`izany mba hialana amin`ny fiovaovan`ny vidin-tsolika.